Ulwenziwa njani uyilo lwemagazini | Creatives Online
Malunga neminyaka engama-20 okanye engama-30 eyadlulayo, ukwenza iphephancwadi kwakungengomsebenzi wakhe nabani na. Ulwazi oluthile kunye notyalo-mali olubalulekileyo bekufuneka ukuze uphumelele. Nangona kunjalo, ngoku, nge-Intanethi, iimagazini ezikwi-Intanethi ziyanda kwaye ziyahlalisana nezomzimba. ukuba ukhe wafuna wenze imagazini okanye ucelwe ukuba uyiyile, usenokuba uye wakhangela kwinetha indlela yokwenza iimagazini. Ngaba siya kukunika isandla?
Siqala kwisiseko sokuba iimagazini zinokuba ziindidi ezahlukeneyo kunye neentlobo ezahlukeneyo. Enkulu, encinci, kabini ngenyanga, ngekota, ngenyanga, iimagazini zeveki ... Apha sithetha malunga amanyathelo ekufuneka uwathathe kunye nayo yonke into omawuyilawule phambi kokuba uqalise kule projekthi.
1 Yintoni omawuyiqwalasele phambi kokwenza imagazini
2 Yila imagazini inyathelo ngenyathelo
2.1 Sebenzisa ucwangciso lokuma kweemagazini
2.2 Ikhava yokubeka kunye namaphepha angaphakathi
2.3 Shicilela kwaye usasaze
3 Uyilwa njani iMagazini ngokukhawuleza nangokulula
Yintoni omawuyiqwalasele phambi kokwenza imagazini
Iphephancwadi ligqalwa njengendlela yokunxibelelana. Igxininise kumxholo othile; eneneni, kunqabile ukufumana amaphephancwadi ngokubanzi ekubeni, xa kunjalo, kuya kuthathwa njengephephandaba.
Amaxesha amaninzi, xa usiva igama elithi magazini, ezo zithengiswa kwiivenkile zokubhala nakwiivenkile zeendaba zithi qatha engqondweni yakho. Kodwa ngokwanda kwe-Intanethi, iimagazini ezibonakalayo nazo kufuneka zikhunjulwe.
Xa uyila iphephancwadi, kubalulekile ukukhumbula iinkalo ezithile Nangona zinganxulumananga noyilo ngokwalo, zinempembelelo kwiphephancwadi. Kwaye zithini ezo?
Umthengi omjongileyo. Ngamanye amazwi, sithetha malunga nokuba yintoni na abaphulaphuli ojolise kubo. Yaye kutheni ibalulekile? Ewe, ngenxa yokuba ikhava, imifanekiso kunye nesicatshulwa kufuneka sibe nomtsalane ngokwaneleyo ukubamba ingqalelo yakho kwaye ufumane umdla. Umzekelo, cinga ukuba ufuna ukwenza imagazini yabantwana. Kodwa ubeka ikhava ngezihloko ezigxininise ngakumbi kubazali kunabantwana, kunye nemifanekiso ebuthathaka, engenantsingiselo engabizi. Ngaba bebeya kuyithenga kuwe? Eyona nto inokwenzeka kukuba akukho.
Ubungakanani bemagazini yakho. Oko kukuthi, ukuba uya kupapasha iveki nganye, nyanga zonke, ezimbini, ezintathu, ezine ... Unokucinga ukuba oku akuchaphazeli ukuyila, kodwa inyaniso kukuba oko kufuneka uxelele. kuyo ukuze bazi ukuba inkupho elandelayo iya kuphuma nini ukuba ufuna baqhubeke bekufunda.
Iza kuba malunga nantoni imagazini yakho? Kanye ngokubaluleke kakhulu umxhasi ojolise kuye kunye nomxholo wemagazini yakho. Ndithetha ukuthini, nizothetha ngantoni? Kukho iimagazini ngezihloko ezininzi: i-cinema, inkcubeko, iincwadi, ukuhleba ... Ngoko kufuneka ugxininise kwinto ethile apho uyazi ukuba kukho abaphulaphuli, ukuba uyingcali (okanye unabantu aba) kwaye uthanda kunye / okanye ufumane imali.
Yila imagazini inyathelo ngenyathelo
Ukuyila imagazini akukho nzima. Ukuba unenye esandleni, uya kuqonda ukuba kukho iindawo ezimbini ezibalulekileyo. Kwelinye icala, ikhava yangaphambili nangemuva eyilwe kwiphepha elinye. Amaphepha okuqala ephephancwadi ebesiya ngasemva, ngokuqhelekileyo apho kubekwa khona abo basebenzisana nephephancwadi (kwiqweqwe elingaphandle) noko kuya kuvela kwiphephancwadi elilandelayo (ngasemva).
Emva koko kwakuza kubakho amaphepha enza iphephancwadi. Kwakhona, ukuba ingokwenyama, eyokuqala ibekwe kunye neyokugqibela kwaye zixutywe ngendlela yokuba, xa ishicilelwe, kwaye isongwe, yonke into ichanekile kwaye ifanele ihambe.
Ukuba iphephancwadi liyinyani, oku akunjalo, kwaye kwenziwa ngokulandelelana.
Ngawaphi amanyathelo ekufuneka uwathathe? Ucinga ukuba unayo yonke inkcazelo efunekayo kwiphephancwadi lakho (iifoto, imifanekiso, iintengiso, imibhalo...) amanyathelo ekufuneka uwathathe ngala:
Sebenzisa ucwangciso lokuma kweemagazini
El eyona isetyenziswayo kwaye iyacetyiswa yi-Indesign. Ayiyonkqubo yasimahla, kodwa ezinye iindlela azifikeleli kwinqanaba lale. Ke ngoko, ukuba ufuna ngokwenene ukwenza imagazini, kwaye ungasebenzisi iitemplates ukuyidala, kuya kufuneka utyale imali ekuthengeni inkqubo.
Akunzima ukuyisebenzisa, kodwa uya kufuna ixesha lokuziqhelanisa nayo kwaye, ngaphezu kwako konke, ukuyifunda. Ezenye kule unayo iQuarkXpress, Illustrator, CorelDrwa, FreeHand...
Ikhava yokubeka kunye namaphepha angaphakathi
Nje ukuba unayo inkqubo, inyathelo elilandelayo yila ikhava kunye namaphepha angaphakathi. Into eyenziwa ngabaninzi kukwenza ngokwahlukeneyo, ngendlela yokuba, xa bevuma, bawadibanise onke amaxwebhu ukuze bawathathe bawaprinte, okanye bafumane ikopi yelo phephancwadi nge-pdf (injalo ke. ihlala inikezelwa ngokubonakalayo, ukongeza ukuyifunda kwi-intanethi).
Ngeli xesha kuyimfuneko ukuba kuthathelwe ingqalelo ifomathi yemagazini (ukuba iya kuba kwi-A4, B5, B6…) kunye ne uhlobo lwephepha eliza kuzotywa kulo (iya kuba nefuthe kwimibala), uyilo lwesicatshulwa ngasinye kunye neefoto, njl.
Le yeyona nxalenye ibalulekileyo yemagazini kuba awuyi kucinga kuphela malunga nendlela yokuhambisa iifoto kunye nemibhalo, iintengiso kunye neefomathi, kodwa kuya kufuneka ucinge malunga:
Ukuchwetheza kwemagazini. Zombini izihloko kunye nezihlokwana kunye nokubhaliweyo.
imibala emele. Ngaba unokuba nomfanekiso-ngqondweni wephephancwadi labantwana lisebenzisa abamnyama nabamhlophe?
Uyilo. Oko kukuthi, uzakuyila njani iphepha ngalinye. Ezinye ziya kufana, kodwa ukuba uzibeke ngolu hlobo zonke uya kuba nesithukuthezi.
Ngokucacileyo, siyayinqumla into yokuba imifanekiso oza kuyisebenzisa isemgangathweni kwaye amanqaku anolwazi oluyinyani, olunolwazi, oludibanisa noluntu, ukuba lunomdla kwaye lunomdla (kwaye lubhalwe kakuhle).
Shicilela kwaye usasaze
Wakuba uligqibile iphephancwadi, lixesha lokuba isigqibo sokuyiprinta (ngoko ke kuya kufuneka uyise kumshicileli kwaye unike iinkcukacha zangaphambili zefomati, uhlobo lwephepha...); okanye uyibeke kuyo Khuphela kwi-intanethi (okanye uyifake eqongeni ukuze iphephancwadi lifundwe kwi-Intanethi).
Konke oku kuyinxalenye yoyilo lwamaphephancwadi.
Uyilwa njani iMagazini ngokukhawuleza nangokulula
Ezi ngongoma zingasentla azinzima. Kodwa inyaniso kukuba xa uqala ukuyila iphephancwadi, kunye nephepha ngalinye, unokugqiba udikwe ngayo kwaye ungaze uyikhuphe. Ngenxa yoko, abaninzi abaqalayo bakhetha, Ngaphambi kokwenza uyilo lwakho, ngokusebenzisa iitemplates.
Ezi zinokufunyanwa zombini zihlawulwe kwaye zisimahla. Phi? Sikushiyela uluhlu.
Ngoku kufuneka uqhubeke nayo kwaye uchithe ixesha elithile usenza uyilo lwemagazini. Eyokuqala inokuba ngoyena uthatha ixesha elide kunye naye, kodwa ke yonke into iya kuba lula kuwe. Ewe kunjalo, ungaphulukani nolo yilo kuba luyakunceda abanye.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukuphefumlelwa » Ukwenziwa njani ukuma kwemagazini